Ukufikelela kwiPakethe yeJuice ngamatyala ebhetri amatsha avela kuMophie | IPhone iindaba
Ukufikelela kwiPakethe yeJuice ngamatyala ebhetri amatsha avela kuMophie
Mophie Kuye kwaphawulwa ngokusungula iimveliso ezihambelana neeterminal ze-iPhone zosuku, ngakumbi ngenxa yamatyala ayo ebhetri asombulula ingxaki eyayikade inzima kakhulu, eyokuzimela kwezixhobo zenkampani yeCupertino eyabonakala ngokungabikho kwayo.
Injalo indlela UMophie usandula ukwazisa ngamatyala ebhetri amatsha abizwa ngokuba yiJuice Pack Access, afumanekayo kwi-iPhone XS, iPhone XR, kunye ne-iPhone XS Max. Makhe sijonge ngokutsha kwezi zixhobo zeMophie ezizama ukuma kwi-Apple's Smart Battery Case egxekwayo.
Yile ndlela uMophie ahlaziya ngayo ikhathalogu esele ifumaneka ukusukela ngo-2018. Kufuneka sitsho ukuba bazokwaziswa ngokusesikweni 99,95 € kwimeko efanelekileyo cngeenkqubo zokutshaja ngaphandle kwamacingo kunye nomgangatho weQi ukuya kuthi ga kwi-5W iyonke. Into "elungileyo" malunga neli tyala kukuba ishiya ngokuchanekileyo isixhobo sombane simahla, kuba ihlala ihlawulisa i-iPhone ngale ntlawulo icothayo kodwa ikhuselekileyo. Inyaniso kukuba inomdla kakhulu kwinto onokuyenza ngaphandle kokuyigcina ixhunyiwe kwizibuko leMbane ngokusisigxina, ngokuqinisekileyo iyandonwabisa.
Ezi meko zitshiphu kwaye azinzulu kune-Smart Battery Case, ukongeza, Imodeli ye-iPhone XS Max ixabisa i-2.200 mAh, ngelixa imodeli ye-iPhone XS kunye ne-iPhone XR ifikelela kwi-2.000 mAh iyonke. Ngaphezulu "kokuhlekisa" i-1.369 mAh ebonelelwe yibhetri ye-Smart Battery Case esayinwe yi-Apple ethi ixabise i-euro ezingama-30 ngaphezulu. Ukuhlawulisa la matyala ungathatha ithuba lokungena kwizibuko le-USB-C okanye uqhagamshelo olufanayo lokutshaja ngaphandle kwamacingo okusebenzisa ukubiza i-iPhone yethu. Ukunyaniseka kuluhlu lwamatyala ebhetri ndikufumanisa kunomdla kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Ukufikelela kwiPakethe yeJuice ngamatyala ebhetri amatsha avela kuMophie
Ukuhanjiswa okushukumayo kuya kuba lixesha elizayo, kodwa hayi elangoku